लगातार हिट फिल्म दिने साउथका यी सुपरस्टार, कति लिन्छन् त पारिश्रमिक ? – " कञ्चनजंगा News "
लगातार हिट फिल्म दिने साउथका यी सुपरस्टार, कति लिन्छन् त पारिश्रमिक ?
साउथ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा शायदै कोही यस्तो कलाकार होला जो चर्चा र कमाईको मामलामा पछि छ । यो इन्डस्ट्रीमा एक से एक सुपरस्टार छन् ।जसका फ्यान फलोइङ बलिउड स्टार भन्दा कम छैन । यी नै स्टारको सूचीमा छन् अल्लु अर्जुन ।
अल्लु अर्जुन तेलुगु फिल्मका सुपरस्टार हुन् । अल्लु अर्जुनले आफ्नो अभिनय यात्रा बाल्यकाल देखि नै सुरु गरेका हुन् । उनले फिल्म ‘ड्याडी’ बाट उनले अभिनय सुरु गरेका हुन् । उनले लिड रोल भने फिल्म ‘गंगोत्री’ बाट सुरु गरेका हुन् । त्यो भन्दा ठूलो ब्रेक उनलाई ‘आर्या’ बाट मिल्यो ।
यो फिल्मले उनको करिअर कायापलट गरिदियो । फिल्ममा उनको जबरजस्त अभिनय देखियो । यही फिल्मबाट उनले फिल्मफेयरको बेस्ट तेलुगु एक्टरको अवार्ड समेत मिल्यो । यो पछि उनको सफलता थप चुलिँदै गयो । उनले एक पछि अर्को ब्लकबस्टर फिल्म दिएका छन् । भारतीय संचार माध्यमहरुका अनुसार उनी तेलुगु सिनेमाका ठूला अभिनेता हुन् । उनले एक फिल्ममा काम गरेवापत १४ देखि १५ करोड पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।
उनी मात्रै साउथका यस्ता स्टार हुन् जसको फेसबुकमा १ करोड भन्दा बढी फलोअर छन् । यसका साथै उनी फोब्र्सको सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने सेलिब्रेटीको सूचीमा समेत समावेश छन्
तपाईंलाई कुनै केटीले मन पराएको कसरी थाहा पाउने ?
‘साहो’ पछि, यस्तो लभस्टोरी फिल्म खेल्दै प्रभास